किया स्पोर्टेज कार सार्वजनिक,मूल्य कति ? « Naya Page
किया स्पोर्टेज कार सार्वजनिक,मूल्य कति ?
प्रकाशित मिति : 12 January, 2019 5:38 pm
काठमाडौँ – कोरियन मोटर निमार्ता कम्पनी किया मोटर्सको नेपालस्थित अधिकृत बिक्रेता कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ प्रालिले नेपाली बजारमा सर्वाधिक रुचाइएको स्पोर्टेज कारको भर्सन सार्वजनिक गरेको छ ।
किया मोटर्ससँग कन्टिनेन्टल टेडिङ सहकार्य गरेको २५ औं वर्षको अवसरमा शुक्रबार एक विशेष कार्यक्रम गरी चौथो पुस्ताको किया स्पोर्टेज कार सार्वजनिक गरिएको हो । नेपाली बजारमा उक्त कारको मूल्य ६९ लाख ९० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
चौथो पुस्ताको स्पोर्टेजमा कियाको नविन ड्राइभिङ प्रविधि र अत्याधुनिक इफोटेनमेन्ट सिस्टम जडान गरिएको छ जसले यात्रा अवधिभरलाई सहजता र मनोरञ्जन प्रदान गर्ने कम्पनीको दाबी छ ।
पेट्रोल र डिजल दुवै भर्सनसँगै नयाँ स्पोर्टेज जिटीलाइन मोडलमा पनि उपलब्ध छ । त्यसैगरी ब्रेकिङ प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउन एन्टीलक ब्रेकिङ सिस्टम, इलेक्ट्रोनिक स्ट्याबिलटी कन्ट्रोल, भेहिकल स्ट्याबिलिटी कन्ट्रोल, डाउनहिल एसिस्टजस्ता विशेषाहरु सँगै निक्कै बलियो स्टीलको प्रयोग गरी कारको बडी तयार गरिएकोले कार, सुरक्षित, आधुनिक र आरामदायी रहेको कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ प्रालिका सहायक महाप्रबन्धक अनिस लामिछानेले बताए । उनले यो कार विभिन्न ६ नयाँ रङमा उपलब्ध रहेको बताए ।
उनले कोरियाबाटै सोझै आयात गरिएको भएपनि हामीले नेपाली बजार सुहाउँदो मूल्य निर्धारण गर्न सफल भएको बताए ।
साताको शेयर बजार : साढे आठ अर्बको कारोबार, कसको कारोबार कस्तो ?
काठमाडौं, ११ माघ । धितोपत्र बजारमा यस साता कारोबार रकम भने पछिल्लो डेढ वर्षको तुुलनामा
सडक बत्तीले व्यवस्थित बन्दै उपत्यकाको ‘ट्राफिकिङ’
काठमाडौं, ११ माघ । तीनकुने बस्दै आएकी सरस्वती खड्कालाई केही समय पहिलेसम्म सडक पार गर्न